90 ku dhimatay daadadka Itoobiya - BBC Somali
90 ku dhimatay daadadka Itoobiya
13 Maajo 2016
Madaxda Itoobiya, ayaa sheegay in ugu yaraan 90 ruux ay ku dhinteen bishan kaddib roobab lixaad leh oo keenay daad iyo buuro ku soo dumay qeybo ka mid ah dalka.
In ka badan afar boqol oo kun oo ruux oo ku noolaa gobolada bariga iyo koonfurta ayaa qaxay. Itoobiya ayey sidoo kale soo food saareen mid ka mid ah abaaraha ugu xun ku dhowaad 50 sano, taasi oo lagu qiyaasay in 1.2 milyan ay hadda ku tiirsan yihiin kaalmo gargaar.
Roobabkan ayey filanayeen inay ku diirsadaan malaayiin abaarsaday, balse wuxuu ku keenay burbur iyo dhimasho. Xalay afar ruux oo ku noolaa gobolka bariga dalka ayuu daad qaaday.
Daadadkan, ayaa adkeeyay in kaalmo la gaarsiiyo dadka baahan, kadib markii wadooyinka qeybo badan oo dalka ah ay burbureen. Mareykanka, ayaa isniintii ku dhawaaqay $128 milyan oo doolar oo gargaar ah. Heerka ay dhibaatadu gaarsiisan tahay, ayey inta badan ku adag tahay inay wax ka qabtaan.
Dowladda Itoobiya iyo hay'adaha gargaarka, ayaa diray baaq ay ku dalbanayaan 1.4bilyan oo doolar, balse ilaa hadda baaqaasi kala bar ayaa la bixiyay, iyadoo malaayiiin ay weli kaalmo doonayaan.